Demon Ninja Asagi Pair (mmsub)
by CHANNEL+ September 02, 2020
(21+) Demon Ninja Asagi Pair မြန်မာစာတန်းထိုး
နင်ဂျာမမတွေရဲ့ စွန့်စားခန်းလေးတွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. တချိန်က ဂျပန်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ သောင်းကျန်းနေချိန်မှာ နင်ဂျာညီအစ်မဖြစ်တဲ့ အာဆာကီနဲ့ ဆာကူရာက လိုက်လံနှိမ်နင်းပေးပါတယ်...အဲ့လို နှိမ်းနင်းရင်း တနေ့မှာ နတ်ဆိုးမမဖြစ်တဲ့ အိုရိုဘိုကို
ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ နတ်ဆိုးမမ အိုဘိုရိုဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီး သူတို့အစ်မဖြစ်သူ အာဆာကီ ကို ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်...တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်သဆိုသလိုပဲ ကံဆိုးချင်တော့ ညီမ ဖြစ်သူ ဆာကူရာကလဲ သူ့နင်ဂျာမမကို လာကယ်ရင်း အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်.
အဲ့နောက်မှာတော့ နတ်ဆိုးမမအိုဘိုရိုဟာ သူရဲ့ အမုန်းတရားတွေကို စနစ်တကျ ပြန်လည်လက်စားချေပုံကို ဟာကနဲ ဟင်ကနဲ ပါးစပ်အဟောင်းသား သားရည်တမြှားမြှားနဲ့ ကြည့်ရှုရတော့မှာမလို့ dark sideမှ အထူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….
(21+) Demon Ninja Asagi Pair ျမန္မာစာတန္းထိုး
နင္ဂ်ာမမေတြရဲ့ စြန႔္စားခန္းေလးေတြ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္. တခ်ိန္က ဂ်ပန္မွာ မေကာင္းဆိုးဝါးေတြ ေသာင္းက်န္းေနခ်ိန္မွာ နင္ဂ်ာညီအစ္မျဖစ္တဲ့ အာဆာကီနဲ႔ ဆာကူရာက လိုက္လံႏွိမ္နင္းေပးပါတယ္...အဲ့လို ႏွိမ္းနင္းရင္း တေန႔မွာ နတ္ဆိုးမမျဖစ္တဲ့ အိုရိုဘိုကို
ဒါေပမယ့္ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ နတ္ဆိုးမမ အိုဘိုရိုဟာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာၿပီး သူတို့အစ္မျဖစ္သူ အာဆာကီ ကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္...တခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္သဆိုသလိုပဲ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ညီမ ျဖစ္သူ ဆာကူရာကလဲ သူ႔နင္ဂ်ာမမကို လာကယ္ရင္း အဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္.
အဲ့ေနာက္မွာေတာ့ နတ္ဆိုးမမအိုဘိုရိုဟာ သူရဲ့ အမုန္းတရားေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္လက္စားေခ်ပုံကို ဟာကနဲ ဟင္ကနဲ ပါးစပ္အေဟာင္းသား သားရည္တျမႇားျမႇားနဲ႔ ၾကည့္ရွုရေတာ့မွာမလို့ dark sideမွ အထူးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္….
Link - https://mkvlinks.xyz/4uOxr5d